विदेशमा हुँदा कमाउने होइन बाँचेर घर फर्किने चिन्ता हुन्छ
Fri, Apr 27, 2018 | 06:21:44 NST
11:49 AM (1 year ago)
Total Views: 51.0 K
मधु मगर/कुवेत ।
देशमा चलेको द्वन्द्वमै कति दिदी बहिनीले श्रीमान् गुमाए । अनि, कतिले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाए । कोहि सुन्दर सपना बोकेर परदेशतिर लागे ।
उनीहरुको सपनामा देशमै दलालको झुट् मिसिइसकेको हुन्छ । तरपनि परदेशमा कमाउने आस जागै रहन्छ । जव परदेशमा समस्या पर्न थाल्छ अनि कमाउने होइन बाँचेर घर फर्किने चिन्ता सुरु हुन्छ ।
गएको महिना सिन्धुपाल्चोककी एक महिला यस्तै समस्या छिचोल्दै नेपाल पुगिन् । दुईजना बालबच्चाको भविश्यका लागि कमाउन कुवेत आएकी उनलाई तिनै बालबच्चासित भेट नहुने चिन्ताले पिरल्यो ।
घर मालिकले गर्ने अत्यचारले बाँच्ने रहर मार्दै गएकी थिइन् । दिनहुँको यातना सहीसक्नु थिएन । उनलाई लागेको थियो जीवनको अन्त्य यहिँ हुने रहेछ ।
केहि नलागेपछि फेसबुकमा आफ्नो पीडा सुनाइन् । केहि सञ्चारमाध्यममा खबर प्रकाशन भयो । सञ्चारकर्मीले नै हामीलाई उद्दारका लागि आग्रह गरे । अनि, म लगायत यहाँका सहयोगी सामाजसेवीको सहयोगमा बहिनीको उद्धार भयो र नेपाल फर्काउन सफल भयौं ।
यनी जस्ता धेरै नेपाली चेलीहरु आजपनि दर्दनाक पीडा भोग्न बाध्य छन् । घरेलु काममा आउने चेलीका पीडा घरभित्रै थुनिन्छन् । उनीहरले सहयोग त के आफ्ना पीडा सुनाउने मान्छे समेत पाउँदैनन् ।
परदेशमा मनैदेखि सहयोग गर्नेहरु थोरै छन् । यहाँ कस्ले गर्छ उद्वार ? जबकी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न लिप्त हुनेहरु बढी छन् । नेपाली नै नेपालीलाई लुट्न पछि पर्दैनन् । पीडितको उद्धार गर्दा एजेन्टले धम्की दिन्छन् । मैले पनि यस्तो धम्की खेपेको छु ।
नेपालमा एजेन्टले लुट्छन्, परदेशमा घर मालिकले । अनि यीनै पीडा सुनाउँदा सहयोगीको नाममा आउने नेपालीले पनि । यसरि दुःख दिने ६० केडि तलब खानेदेखी उच्च तहसम्मका छन् ।
मैले फेरि खाडी मुलुकमा नेपाली महिला पठाउने कुरा सुन्दै छु । यो सरासर गलत हो । पहुँचवालाका छोरीचेली खाडी मुलुक जानु पर्दैन भनेर गरीबका छोराछोरी मार्ने अधिकार सरकारलाई छ र !
सरकारले देशमा रोजगारीको वातावरण मिलाउने कि जोखिममा परदेश धकेल्ने ? के सरकारमा बस्ने मान्छेहरुलाई थाहा छैन त यहाँ समस्या छ भन्ने ? हैन भने तीनको के स्वार्थ छ ?
यदि नेपाली महिलाको भलो चाहने हो भने घरेलु काममा पठाउनै हुँदैन । के नेपालमा हुने महिला अधिकारकर्मीले थाहा पाएका छैनन् परदेशी महिलाको पीडा । होइन भने किन चुपचाप ? के स्वार्थ छ तिनको ?
महिलाको हकहितका लागि काम गर्ने महिला अधिकारकर्मीले सरकारको यो कदमको विरोध गर्नु पर्छ ।